Xayawaanno Uu Aadamuhu U Adeegsado Colaadaha: Maroodiga: Hubka Sida Ba’an Wax U Gumaada – |
Xayawaanno Uu Aadamuhu U Adeegsado Colaadaha: Maroodiga: Hubka Sida Ba’an Wax U Gumaada –
In Fardaha loo adeegsado dagaalku waa arrin taariikh aad u dheer leh, in badanna lagu arko sooyaalka dagaallada adduunka iyo xitaa masraxiyadaha laga jilo. Laakiin arrinta aynaan u baran waa in maroodiga laftiisana la isticmaali karo xilliga colaadaha.
Waqtiyadii ka horreeyey horumarka dhinaca Tiknoolajiyadda iyo gaadiidka xawaarihiisu sarreeyo ee adduunka, xilliyada dagaallada maroodigu waxa uu lahaa faa’idooyin badan, wax yaabaha loo adeegsan jirayna waxaa ka mid ahaa qaadista rarka culus ee aanay farduhu qaadi karin, dagaalkii koowaad ee adduunkana si aad ah ayaa ay ciidamadii iska soo horjeeday maroodiga u gaadiidsadeen.
Haddii aynu dib ugu noqonno taariikhda waxa aynu arkaynaa in ummaddii ugu horreysay ee maroodiga u adeegsata dagaalku ay ahayd Hindida, waxa aanay ahayd 1500 oo sano ka hor dhalashadii Ciise (CS). Waxa ay taariikhdu ina baraysaa in waayahaas halbeegga ugu weyn ee lagu garto awoodda boqorku ay ahayd hadba tirada maroodiyada uu haysto, waayo waxa ay ahaayeen hub culus oo dagaal kasta oo dhaca kaalin aad u miisaaman ka qaadanaya. Waxa ay taariikhyahannada qaar faa’idadii maroodiga ee waqtigaas barbar dhigaan hubka sida weyn wax u gumaada ee hadda dunida ka jira.
Arrinta kale ee xiisaha leh ayaa ah in tiradii ugu badnayd ee maroodiyo ah ee uu boqor keliyi yeeshaa ay ahayd 21 kun oo maroodi oo uu lahaan jiray mid ka mid ah boqorradii Hindida ee waqtiyadaas.